Caadooyinka iyo dhaqanka bulshada reer Burtuqiiska | Safarka Absolut
Iyadoo in ka badan 800 sano oo taariikh ah, Boortaqiiska waa mid kamid ah wadamada ugu faca weyn aduunka. Qarniyaal dhan, dhaqammo kala duwan oo Bortuqiis ah iyo astaamo dhaqameed ayaa la aasaasay, kuwaas oo maanta qeexaya bulshadooda iyo dalkooda meelaha ugu kala duwan.
Laga soo bilaabo guntinimada laga bilaabo khamriga, farshaxanka iyo farsamada gacanta ilaa muusikada, las ciidaha iyo xajka, waxaa jira dhowr sababood oo lagu booqdo dalkan cajiibka ah.
3 Ciidaha caanka ah iyo xajka
4 Farshaxan iyo farshaxan
Boortaqiiska muddo dheer ayuu ahaa wadan leh dhaqan cunno weyn. Mid ka mid ah cuntooyinkii ugu horreeyay ee ka dhex muuqday muuqaalka gastronomic ee Portuguese wuxuu ahaa kalluun.
Koodhku wuxuu xal u ahaa dhibaatada dadka haysata kalluun cusub, maadaama kalluunkani uu sii dheeraynayo markii lagu ilaaliyo cusbada. Iyada oo qayb ka ah dadka aan haysan lacag badan oo ay ku iibsadaan kalluunka cusub, cod wuxuu bilaabay inuu noqdo xiddigga caloosha Burtuqiiska waana, maanta, mid ka mid ah cuntooyinka uu ugu jecel yahay.
Si aan runta u sheegno, waxaa jira kun siyaabood oo loo kariyo koodhka: kalluunka la kariyey, kareemka, hilibka duban, rootiga galleyda, iwm. Iyo tan ugu muhiimsan, inay weheliso a khamri dekedda wanaagsan. Khamrigan waxaa lagu soo saaraa beeraha ku yaal Dooro gobolka khamriga (gobolkii khamriga ee ugu horreeyay ee laga aqoonsado adduunka) oo lagu kaydiyo khamri, in Vila nova de gaia.
Dhaqammada Bortuqiiska sidoo kale waxaa lagu calaamadeeyaa muusig. Mid ka mid ah noocyada muusikada lagu garto ee Portugal, iyo adduunka oo dhan, waa fado.
Noocan muusigga ah bilaabay inuu ka dhex muuqdo Boortaqiiska qeybtii labaad ee qarnigii XNUMX-aad, laakiin waxay ahayd oo keliya intii u dhaxeysay 30s iyo 40aad ee qarniga soo socda in ay heshay saadaalin, iyada oo loo marayo baahinta sida shineemooyinka, tiyaatarka iyo raadiyaha.
Waxaa jira dhowr waji oo calaamadeeya noocyadan muusikada sida dhaqan ahaan, hilow iyo aayatiin; ku saabsan fanaanada fado, oo leh qaab u gaar ah labbiska iyo heesaha sida fannaanka kale ee noocyada kale. Waxaa xusid mudan in fado ay UNESCO u aragtay dhaxal aan la taaban karin.
Laakiin kaliya fado kuma noola goobta muusigga Burtuqiiska. Nooc kale oo muusig ah oo caan ku ah dalkan ayaa ah muusig caan ah.r, xaadir ku ah tiro badan oo ciidaha ah ee Portugal - qaababka ugu caansan ayaa ah Bailinho iyo Madeira, Malxao oo leexo.
Ciidaha caanka ah iyo xajka
Ciidaha iyo xajka ayaa ah dhinacyo kale oo aad ugu badan dhaqammada Boortaqiiska waxayna la socdaan gacan ku haynta meelaha qaarkood ee aan kor kusoo xusnay, sida gastronomy iyo music.
Qaybaha sida Santo Antonio, San Pedro iyo São João iyo xajka meesha quduuska ah ee Marwadayada Faadumo, iyo kuwo kale, malaayiin dalxiisayaal qaran iyo ajnabi ah ayaa dhex wareegaya waddooyinka magaalooyinka waaweyn iyo magaalooyinka Portugal, qayb ahaan ama cibaado, iyagoo door aad u muhiim ah ka ciyaara dhaqamada Bortuqiiska.
ka xisbiyada San Antonio, magaalada Lisbon, waa xafladaha ugu horreeya ee ugu waaweyn dalka; Waxaa loo dabaaldegaa inta lagu jiro usbuuca Juun 13, guryaha waxaa lagu qurxiyaa basil, sardinyo la dubay iyo rootiga galleyda waa la cunaa, maaddaama loo tixgeliyo inuu yahay quduuska guurka, aroosyada badan ayaa la isku dayaa in lagu xuso inta lagu jiro xafladahaas.
Como Saint Anthony ka yimid Lisbon, sidoo kale Porto iyo Braga ee São João waxay kulmaan kumanaan dad ah iyo madadaalo, iyagoo ah meesha ugu sareysa ee habeenkii laga bilaabo 23 ilaa 24 Juun; xaflad loo fidiyey qaybaha kale ee adduunka oo si fiican loogu yaqaan "The night of San Juan", taas oo dab la shido si looga eryo astaamaha xun.
Sidoo kale xajka u taga meesha barakaysan ee Bikrada Faadumo waxay dhaqaajiyaan dad badan waxayna qayb ka yihiin caadooyinka Bortuqiiska. Taariikhaha ugu muhiimsani waa, shaki la'aan, Maajo 13, oo ah taariikhda muuqaalka ugu horreeya ee bikradda ah ee saddexda adhijir lagu xuso, magaalada Fátima ee 1917. Taariikhda kale ee muhiimka ahi waa Oktoobar 13, oo u dabaaldegta soo bixitaankii ugu dambeeyay Bikradda.
Farshaxan iyo farshaxan
Aag kale oo ka soo muuqday muuqaalkii dhaqameed ee Boortaqiiska muddo ka dib wuxuu ahaa farshaxan iyo farshaxan. Iskusoo wada duuboo Laga soo bilaabo qarnigii 17aad, farshaxanka iyo farshaxannimadu waxay bilaabeen inay yeeshaan xiriir qaran, oo leh tixgelin gaar ah meelaha sida dhoobada, dhejiska, daabac, dahabka, iyo kuwo kale.
La Dhaqankii Burtuqiiska ee cajaladaha ayaa ka dhacay qarnigii 18-aad waxaana loo isticmaali jiray tan iyo wixii ka dambeeyay darbiga iyo qurxinta. Mawduucyada sida shaqooyinka Boortaqiiska, diinta iyo kuwa kale ayaa lagu sawiray roogaga. Heer qaran iyo heer caalamiba, roogagga ugu caansan ee la yaqaan shaki la’aan waa roogaga Arraiolos, oo ka kacay Alentejo, magaalada Arraiolos.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Caadooyinka iyo dhaqanka bulshada reer Bortuqiiska
macluumaadka aad bixiso waa mid aad u wanaagsan
Ku jawaab jgonzález
Gaar ahaan ma jecli waayo waxba ma hayso, waan ka xumahay laakiin aniga ima adeegayso
Orribl-kani waxba ma tarin boggan. Haddii aadan dhigin waxyaabaha sida wanaagsan noogu adeegaya, ha daabicin waxna
Ku jawaab uxa
qudhun ayaa sheegay vweno iyo habaar habaar ATT KRIAS
VAMONOZ A SORIANO ATTE EL KRIAZ IYO POPHES PERROZ PUDRANZE DAMN PUÑALEZ
Waxa aan doonayo ma soo baxo, maxaa yeelay dhaqamo ayaan ku leeyahay dalka Bortuqiiska idinkuna waxaad ii soo dalxiis gashaan ... MA RADIN.
Ku jawaab lauri
Waan ka xumahay laakiin ma ahan waxa aan doonayo
Macluumaadka aad isiisay waad mahadsantahay sifiican, adkeysi paraguay c ………… ..
WACAN WAAN KU JAWAABAY BOGGA IYO SUPER WANAGSAN WAAN KA JECLAHAY FURSADNA AYAAN KU HELAYAA IN AAN KU TAGO PORTUGU
Magaalooyinka Kanada ee leh cimilada ugufiican
10ka magaalo ee ugu quruxda badan Morocco